Agaasimihii shaqada laga eryey oo la dalcsiiyey | allsanaag
Agaasimihii shaqada laga eryey oo la dalcsiiyey
Agaasimihii shaqada looga eryey xilkisii uu gudan waayey ayaa hadda LA TALIYE waxa loogu soo magcaabay Wasiirkii shaqada ka eryey .
RW Somalia oo la Taliye u Magacowdey Agaasimihii Arimaha Gudaha ee Shaqada laga Eryey
Ra’isal wasaraha Somalia ayaa sidoo kale guddi Wasiiro kooban ee ka warqaba howlaha wasaradaha arimaha gudaha iyo Dastuurka u magacaabey gudiyadaas waxaa xubno ka ah wasiirada labadaan wasaradood.
MUQDISHU, Somalia- Wararka warsidaha GO ka helayo xubno ka warqaba xafiiska Raisla wasaraha ayaa sheegaya in Wasiirka Kowaad ee dowlada Federaalka Somalia u magacaabey la taliyahiisa arimaha gudaha, Federaalka iyo dib u heshisiinta Agaasimihii guud ee Wasaarada arimaha gudaha dhowaan xilka laga qaadey Yaxye Cali Ibraahim.
Yaxye Cali Ibraahim oo isku beel yihiin Ra’isal waaare Khayre ayaa markii Wasiirka arimaha gudaha dowlada Cabdi Farax Siciid diidey xil ka qaadista ku sameeyey ayaa markii dambe ku aqabaley Kadib markii culeysyo siyasadeed ka yimadeen dhinacyo kala duwan.
Wararka ayaa sheegaya in talabadaan dib u soo celisay khilaafkii ka dhex jirey xafiiska Ra’isal wasaraha iyo Wasiirka arimaha gudaha iyadoo xogtaan sheegeyso in Cabdi Farax Juxa uu diidey xilkaan cusub ee loo magacaabey Yaxye Cali Ibraahim.
“Magacaabistaan waxay lamid tahay iyadoo shaqadii Wasaarada arimaha gudaha la geeyey xafiiska Ra’isal wasaraha” sidaas waaa GO u sheegey mid kamid Shaqaalaha wasarada kula hadlay khadka taleefanka.
Lama oga sababta keentey in Ra’isal wasare Khayre qaato go’aankaan lakiin warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xiriirka labada mas’uul u dhexeeya uusan wanaagsneyn tan iyo intii wasiirka arimaha gudaha safarka kaga soo noqdey Puntland halka dhinaca kale xogtaan sheegeyso in Wasiirka kowaad ee Somalia uu ka baqayo aragtida Wasiir Juxa ka qabo arimaha Federaalka, doorashooyinka iyo dib u heshiisiinta.
Dhinaca kale wararka warsidaha GO helayo ayaa sheegaya in dhowaan Madaxweynaha Dowlada Federaalka uu diidey soo jeedin Wasiirka Kowaad ee xukuumada Somalia ka timid taasoo aheyd in isku shaandheyn kooban uu ku sameeyo golihiisa wasiirada.
Wararka ayaa sheegaya in RW Khayre talabadaan u qaadi lahaa sidii kalsooni uga sameysan lahaa xildhibaanada mucaradka ah kuwasoo in muddo ah hadal hayey in codka kalsoonida ah uga qaadi lahaayeen Wasiirka Kowaad iyo xukuumadiisa.
Muranka Wasaarada Arrimaha Gudaha
Madaxda Daarood iyo awoodooda Muqdisho
← Heshiis Soomaaliya iyo India Daawo Baaqa Beesha uu ka soo jeeday Askarigii dilay Wasiir Siraaji →